အာဏာရူးကြီး: အလ္လာ အရှင်မြတ်အား ဝတ်ပြုနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး
အလ္လာ အရှင်မြတ်အား ဝတ်ပြုနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး
Posted by အာဏာရူးကြီး သန်းရွှေ at 5:40 PM
WhiteFlame January 22, 2010 at 2:27 AM
အဲ့ဒီပုံလောက်ကတော့ photoshop သမားတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဗျ....
The Rebel Riot January 22, 2010 at 5:34 AM
ကလားကို ကတုံးတုံးပြီး သင်္ကန်း ၀တ်ခိုင်းထားတာ...ငါသိတယ်...
Mohammad January 31, 2010 at 10:41 AM
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် ရွှေလီးဖြတ်၍ လိုးခဲ့တယ် .. ရွှေလီးကိုဖြတ် မိုဟမ္မဒ် စောက်ပပ် တံခွန် ထူခဲ့တယ် ..
ကိုရ်အာန်သျှတ္တရ လိုးနည်းပြ မုခအာယတ် ခေါ်ကြတယ် .. အလာအတွက် အကြမ်းဖက် အသက်ပေးဖို့ ညွှန်းကြားတယ် ...
မိုဟာမက်သခင် ဂျန္နတ်ဝင် ကိုလာဒင် ဗုံးနဲ့ခွဲ .. မခွဲပါနဲ့ ကိုယ့်လူရယ် အာလာရှင်ကြီး လီးပြဲမယ် ..
ဘုခ်ျ ခြောက်ခြောက် ဘလဲ လှန့်လှန့် .. ခွဲလိုက်ကြစို့ အသေခံဗုံး .. သံရုံးကိုပတ် … ဂျီဟတ် … ဂျီဟတ် ..
မိုဟာမက်ကို လိုးထုတ်တဲ့ အထီးနဲ့ အမ သေတော့ ဦးလေးဖြစ်တဲ့ အဘူလထစ်က မိုဟာမက်ပေါက်စကို မွေးစားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီ လထစ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာကို အကြမ်းဖက်ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ မိုဟာမက်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ … Thank you all.
Mohammad January 31, 2010 at 10:57 AM
မေရီပျိုစင် ဘုရားလီးဝင် သခင်ယေရှု မွေးလေသည် .. ပြေးလွှားလျက် နွားစားခွက် အသက်လု၍ မွေးရသည် ..
ယေရှုခြေမြတ် ရေကိုရှပ်လည်း လက်ဝါးကပ်မှာ သေခဲ့သည် .. သမ္မာကျမ်းမြတ် ဓားကိုချပ် ကမ္ဘာပတ်၍ သူသတ်သည် ..
ယေရှုသေပြီး တမန်ကြီး ရွှေလီးမိုဟမ္မဒ် ပြန်ဖြစ်သည် .. ကိုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် လီးအာယတ် ဂျီဟတ်ဂျီဟတ် လုပ်ကြသည် ..
အလာအတွက် အကြမ်းဖက် ဆူပွက်ခိုက်ရန် ပြုကြသည် .. ကမ္ဘာတစ်ခွင် ပညာရှင် အော့ချင်အန်ချင် မုန်းကြသည် ..
အလာရှင်ကြီး လီးပြဲပြီ .. ဂျန္နတ်ဘုံကြီး လှုပ်နေသည်။ ဒီဒီ တစ်လှည့် ရီတစ်လှည့် … မိုဟာယေရှု မွေးသတဲ့။ အာမင် …
ဒီဒီ (ခဒီဂျာ မိုဟာမက်ရဲ့ တည်ပွဲ) ရီ (မေရီ ယေရှုရဲ့ မားသား) .. အာမင် …
ဒီဒီ စောက်ပပ် မိုဟမ္မဒ် ဆီးရီးယတ်စ်လီး ယက်နေသည် .. မိုဟာမက်ပါးစပ် ဒီဖုတ်ဟပ် ဖပ်တတ် ပျပ်တတ် မြည်နေသည် ..
ဒီဒီ ဖုတ်မြတ် မိုဟမ္မဒ် ရွှေလီးဖြတ်၍ လိုးလေသည် .. နောက်နှောင်းကြာရင် ဘင်လာဒင် ဒီခင် မွေးတော့သည် .. အာမင် …
Mohammad January 31, 2010 at 4:10 PM
ခေတ်မီသူတိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဆန့်ကျင်ကြသည်
အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဒဗလျူဘုရ်ှသည် ၊ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးဟု တရားဝင်ကြေညာခြင်းမရှိသော်လည်း ၊ အယ်ကိုင်ဒါအကြမ်းဖက်သမားများနှိမ်နှင်းရေးဟုတရားဝင်ကြေညာကာ အီရတ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးကို လုပ်ခဲ့ပါသည် ။
ယခုတဖန်ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ရေးသမားကြီးအဖြစ် ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ မျှော်လင့်တောင့်တ အားထားနေကြသော အမေရိကန်သမ္မတဘားရက် အိုဘားမားက ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ တာလီဘန်တို့ကို အစိုးရအဖြစ်က ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ၇ နှစ်ကြာလာပေမယ့် အမေရိကန်နဲ့ နေတိုးတပ်ဖွဲ့များအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးပြီး လာနေတယ်၊ ဗျူဟာသစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးနဲ့ မဟာမိတ် တွေကို တန့်သွားအောင်၊ ပျက်သွားအောင်၊ ရပ်သွားအောင် လုပ်ရေးဖြစ်တယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ သူတို့ ကွန်းခိုနေရာကနေ ဖယ်ရှားရေး၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီး စုမလာရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ သောကြာနေ့မှာ ကြေညာ ရင်း ရှင်းလင်း ပြောဆိုသွားပြန်ပါပြီ ။ အမေရိကန်တပ်များကိုလည်း ယခင် ၁၇၀၀၀ အပြင် နောက်ထပ် ၄၀၀၀ ပါ ထပ်ပို့မယ်လို့ဆိုပြန်ပါပြီ ။ ဒါဟာလည်း အကြမ်းဖက် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးသော မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ကလည်းပဲ ၊ အိန္ဒိယ ကွန်ဂရက်စ်ပါတီက ဂန်ဒီ ( ဂျာဝါဟာနေရူး၏မြစ်)က ၊ သူတို့ရဲ့ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကြာပန်းဟာ မူဆလင်များရဲ့ခေါင်းတွေကို ဖြတ်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ ၊ အမျိုးသမီးတွေကို တဖက်သတ်ချုပ်ခြယ်ထားတဲ့ အစ္စလာမ်ဥပဒေ ၁၅၀ကျော်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးအပေါ်အကြမ်းဖက်ခြင်းမှ ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားကော်မရှင် ( the National Commission on Violence Against Women ) မှ Kamala Chandrakirana က ကြေညာလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ၊ ဘုရင့်ချွေးမ(Princess Amira al-Tawil) က အမျိုးသမီးများကားမမောင်းရဆိုတဲ့ ဥပဒေကို ၊ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေပါပြီ။
Mohammad January 31, 2010 at 4:11 PM
အလာအရှင်ရဲ့ အမိန့်တော်မြတ်မရ ၊ လူရာအသွင်းမခံရရှာ ။ ကိုယ့်အမေနှင့် ကိုယ့်သမီးအပါအဝင် မိန်းမဆိုလျင် ကလေးမွေးစက်လိုသာ သဘောထားခံရရှာတဲ့ပါကစ္စတန်လို့ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်း မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ၊ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမ အနည်းဆုံး၎ယောက် အများဆုံး အကန့်အသတ်မရှိ ယူနိုင်ပေမယ့် ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောင်္ကျား တစ်ယောက်သာ ယူခွင့်ရှိသတဲ့ ။
ယောင်္ကျားက မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကွာချင်ရင် ၊ ဟေ့ မင်းကိုငါကွာပြီ လို့ ၃ ကြိမ်ပြော လိုက်တာနှင့်ကွာပြီးဖြစ်သတဲ့ (အလာအရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်တော်မြတ်အရလေ) ၊ အဲ သို့ပေမယ့် မိန်းမကတော့ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကို ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ကွာရှင်းခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗျာ ၊ (ဟီး တော်တော်တရားတဲ့ အလာအရှင် ။ ပြောရင်းတောင်ကိုးကွယ်ချင်လာပြီနော် ။)
အဲဒါတွေကြောင့် ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း ယောင်္ကျားများက မိန်းမများအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုခင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သတဲ့ဗျာ-
- မိန်းမ လူဦးရေ၁၂၅၀၀မှာ တစ်ဦးနှုန်း မဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
-ယခင်နှစ်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမ ၅၀ ရာနှုန်းဟာ ပါးရိုက် ၊ ကန်ကြောက် ၊ ထိုးကြိတ်ခံခဲ့ရသတဲ့။
-နာရီတိုင်းမှာ မိန်းမ ၂ဦး မဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
- လွန်ခဲ့သောနှစ်က မိန်းမ ၅၀၀ နီးပါး ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်သေမှုဖြစ်ခဲ့သတဲ့ ။
-သတိုးသမီး၁၆၀၀နီးပါးဟာ မီးရှို့ခံခုရြသတဲ့ ။
-နေ့စဉ်ဖျမ်းမျှ ၉ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
-အမျိုးသမီး ၇၀၀၀ ကျော် လွန်ခဲ့နှစ်က အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက် မီးရှို့ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
-အမျိုးသမီး ၁၂၆၁ ဦးကတော့ တစ်သက်လုံးလူတောတိုးမရအောင် လုပ်ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
-၂၀၀၅ခုနှစ်အတွင်း မိန်းခလေး ၁၄ဦးကတော့ မျက်နှာ အက်ဆစ်အပက်ခံခဲ့ရသတဲ့ ။
-အမျိုးသမီးအရေးလုပ်ရှားသူအများအပြားကတော့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရတာတွေ ၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရတာတေါလည်းရှိနေသတဲ့ဗျာ ။
ကဲ လုပ်ကြဦးမလား မူဆလင်မယား ။
ရှုစားတော်မူကြပါဦး ဟောဒီမှာ ၊ ဗီဒီယိုကလစ်(ကလစ်ကလစ်) ။
Mohammad January 31, 2010 at 4:12 PM
Mohammad January 31, 2010 at 4:14 PM
Mohammad January 31, 2010 at 4:24 PM
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ စဉ်းစားစရာ မေးခွန်းများ
၃. ထာဝရဘုရားလို့ မြန်မာတွေသိနေတဲ့ God နှင့် ဟိန္ဒူဘုရား ဗြဟ္မဏကြီးတို့ကလည်း ဒီကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ် ။ သူတို့ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူအများစုကလည်း (အိုဘားမားကြီးအပါအဝင်ပေါ့) ထောက်ခံနေကြပါတယ် ။ ဒီကမ္ဘာအပြားကြီးကို အဲသည် ဖန်ဆင်းရှင် နှစ်ပါးနှင့် အလ္လာဟ်ရှင် တို့ အတူတူပူးပေါင်းပြီး ဖန်ဆင်းကြတာလား ။ တစ်ပိုင်းစီခွဲပြီး ဖန်ဆင်းခဲ့တာလား ၊ ကိုရန်ကျမ်းစာအထောက်အထားနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးပါ ။
၆. ချမ်းသာစေလိုသောကြောင့်ဟု ဆိုပါက ယခု ခန္ဓာရှိသူတိုင်း ဆင်းရဲအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့နေရပါသည် ။ အလ္လာဟ်ရှင် ဖြစ်စေလိုသည့် ချမ်းသာမဖြစ်သည်မှာ အနန္တတန်ခိုးတော် မရှိလို့ ဘာအစွမ်းအစမှ မရှိလို့ ဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုပါက ဘယ်လိုပြန်လည် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း?
Mohammad January 31, 2010 at 4:26 PM
Mohammad January 31, 2010 at 4:27 PM
၈. လူသားတို့ကို မေတ္တာ ဂရုဏာဖြင့် ဖန်ဆင်းသည်ဟု ဆိုပါကမည်သူကမှ မလိုချင်မတောင့်တတဲ့ အိုရခြင်း နာရခြင်း သေရခြင်းဒုက္ခဆိုးကြီးကိုပါ
ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါသနည်း? အလ္လာဟ်ရှင်၏ မေတ္တာကို ရှင်းပြပါ။
၉. ခန္ဓာရှိသူတိုင်း ဒုက္ခရှိသည်ဟု လူတိုင်းသိကြပါသည် ။ သင်ကိုယ်တိုင်လဲ ဒုက္ခရှိတာ ငြင်းချက်မရှိသေချာပါ၏ ။ ဒုက္ခ ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဒီခန္ဓာကို အလ္လာဟ်ရှင် က ဖန်ဆင်းပေးသည်ဟု ဆိုပါက ဒုက္ခဖြစ်ရခြင်း ရင်းမြစ် ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူမှာ အလ္လာဟ်ရှင်ပင်ဖြစ်မနေဘူးလား?
၁၀. အလ္လာဟ်ရှင်သာ မဖန်ဆင်းခဲ့လျှင် သင်ဒီဒုက္ခတွေကို တွေ့ကြုံနိုင်ပါသလား? ဒီဖန်ဆင်းရှင်၏ လက်ချက်ကြောင့် မွေးရခြင်းဒုက္ခ စီးပွါးရေး လူမူရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး အိမ်ထောင်ရေး သားရေး သမီးရေး အိုရေး နာရေး သေရေး ဒုက္ခအစုတို့ ဖြစ်ရသည်မှာ မည်သူငြင်းနိုင်ပါသနည်း။ စဉ်းစားပြီး သဘာဝကျကျ ငြင်းချက်ထုတ်ပါ။
၁၁. အလ္လာဟ်ရှင်သည် အနန္တမေတ္တာ၊ ဂရုဏာရှင်ဖြစ်ပါလျှက် ဘာကြောင့်လူ့ဘ၀ကို ကြမ်းတမ်းစေသနည်း? မအို မနာ မသေသော ဂျန္နတ်သုခဘုံသို့ အစကတည်းက ဘာကြောင့်မပို့ဘဲ လူသားတို့ကို ဒုက္ခ ခံစားစေသနည်း? အနန္တမေတ္တာ ဂရုဏာရှင်ဆိုသော စကားနှင့်ကိုက်ညီအောင် သုံးနှုံးဖြေကြားပေးပါ။
၁၃. မွေးခြင်း သေခြင်း ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသာခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ကြေကွဲခြင်း စသည့် အရာရာတိုင်းသည် အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်အတိုင်း သာ ဖြစ်သည် ဟုဆိုပါက၊ သူတပါး၏ စော်ကားခံရသော အမျိုးကောင်းသမီးတဦး၏ အဖြစ်ဆိုးသည် အလ္လာဟ်ရှင်၏အလိုတော် အတိုင်းဟု သဘောသက်ရောက် ဖွယ်ရှိပေသည် ။ ဒီလိုဆိုပါက အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဂရုဏာတော်က မည်သို့နည်း?
၁၆. ကိုယ့်ဟာကိုရှာစားပြီး အလ္လာဟ်ရှင်ကျွေးသည်ဟူသောစကား မိမိဘာသာစီးပွါးရှာ၍ ပြည့်စုံခြင်းကို အလ္လာဟ်ရှင် ပေးသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြပါ။
သင် မရှာထားပါက အစားအစာရပါမည်လော။ သင်စီးပွါးမရှာပါက ပြည့်စုံပါမည်လား ။ ထိုသို့ (စားရခြင်း၊ ပြည့်စုံရခြင်းအကျိုးတရားတို့တွင်
အလ္လာဟ်ရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိပါသလား) ရှိပါက ဖော်ပြပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုရှာစားပြီး တလွဲကျေးဇူးတင်ရာရောက်မနေဘူးလား၊ သဘာဝကျအောင်စဉ်းစားဖြေကြားပေးပါ။
၁၈. အလ္လာဟ်ရှင်သည် ဤကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းသည်ဟုဆို၏။ သို့သော် တခြားတခြားသော စကြာဝဠာ ဂြိလ်အသီးသီးမှ ဂြိလ်သားများ ဤကမ္ဘာသို့ရောက် ရှိနေခြင်း ရောက်ရှိလာခြင်းတွေကို သိပ္ပံသုတေသနပြုစာအုပ်များတွင် အထင်အရှား တွေ့မြင်နေရပါသည် ။ ထိုဂြိလ်သားများကို အလ္လာဟ်ရှင်ဖန်ဆင်း ခဲ့သလား ။ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုပါက ကျမ်းအထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် ဖြေကြားပေးပါ။
၁၉.သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ၏ တိုးတက်တွေ့ရှိမူတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကို ငြင်းဆန်နေသကဲသို့ သက်ရောက်နေ ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့် သိပ္ပံပညာက မှားသည်ဟုပြောမလား ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ မှားသည်ဟု ပြောမလား။ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ငြင်းချက်ထုတ်ပါ။
Mohammad January 31, 2010 at 5:16 PM
အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင် ၊ မူဆလင်အမျိုးသမီးများ ဘူးရ်ကာ(burqa) ခေါ် ခေါင်းမြီးခြုံ ဝတ်ရုံဝတ်ဆင်ခြင်းမှ တားမြစ်ရန် မိန့်ကြားလိုက်ကြောင်း ၊ အမျိုးသမီးများ ကို ခန်းဆီးနောက်ကွယ်က အကျဉ်းသားများအဖြစ် ၊ လူလိုသူလို နေထိုင်ရေးအခြေအနေမှ ကျဉ်ဖယ်ထားသည့်အဖြစ် နှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်စေခြင်းအဖြစ်တို့ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ပိုင်နက် အတွင်း ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင် ၊ ဟု မိန့်ကြားသွားကြောင်း သိရသည် ။
ထို့ပြင် ၊ ဘူးရ်ကာသည် ဘာသာရေးသင်္ကေတမဟုတ် ၊ အမျိုးသမီးတို့ နှိပ်ကွပ်ခံရခြင်းနှင့် ကျိုးနွံခြင်း သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်း ၊ ၄င်းသည် ကျနော်တို့ ပိုင်နက်မြေပေါ်တွင်ကြိုဆိုခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဟု ကျနော် အလေးအနက်ပြောကြားလိုကြောင်း မိန့်ကြားလိုက်ရာ တစ်ခဲနက်သြဘာပေးခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရသည် ။
Mohammad January 31, 2010 at 5:28 PM
Football ace David Beckham and his wife Victoria have reported embraced Buddhism.
"David and Victoria have gone completely Californian! David has begun wearing health, prosperity and performance beads around his wrist. He has started yoga and stretching classes afteraknee injury, and thenateammate suggested Buddhist chanting to soothe his mind,"asource told Britain"s Look magazine.
"Now he and Victoria doashort five-minute chant when they wake up to start the day off on the right foot, repeating, "Homage to the blessed one, the worthy one, the rightly self-awakened one," the source added.
Mohammad February 1, 2010 at 1:44 PM
လူဆိုတာ မိမိယုံကြည်ရာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ အချိန်မရွေးထွက်နိုင်တယ်။ ခရစ်ယာန်ကလဲ အချိန်မရွေးထွက်လို့ရတယ်။ ဟိန္ဒူကလဲ အချိန်မရွေးထွက်လို့ရတယ်။ လူသားသဘာဝအရ မိမိတို့ ဘာသာကနေစွန့်ခွာရင် စိတ်ထဲမှာ မကျေမချမ်းဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စွန့်ခွာလို့ သတ်ဖြတ်မယ်။ ဒုတ်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမူမျိုးဟာ ဘယ်ဘာသာမှာမှ မရှိပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ကနေ ထွက်တဲ့သူကို သတ်ပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ကြားချက်ကို အခုထက်ထိ မယုံတ၀က် ရှိနေဆဲပါ။ မယုံတဲ့သူလဲ အပြစ်မတင်ထိုက်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ရဲ့ ယုတ်ညံ့ချက်က တွေးခေါ်မှန်းဆနိုင်တဲ့ ဘောင်ရဲ့အပြင်မှာရှိနေတာကိုး။
သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်း စအိုကို မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး အတင်းမွတ်ဆလင်လုပ်ခံခဲ့ရတာပါ။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ allahကို မယုံတော့ရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ထွက်ခွာခွင့်မရပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်ရာကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရပါတယ်။ အဲလောက် အခြေခံအကျဆုံး လူအခွင့်အရေးတောင် မခံစားရတဲ့ ကုလားတွေကို လူစာရင်းသွင်းနေတာ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါပြီ။ Quran ကျမ်းမှာ မွတ်ဆလင်ကထွက်ရင် သတ်ပြစ်ရမယ်လို့ ရေးထားတာ အမှန်ပါ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းပြောလို့ ဆော်ကားတယ်ဆိုရင်. . . လိမ်ညာပြောမှ ဂုဏ်တက်ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒရဲ့ အဆင့်အတန်းလဲ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါပြီ။
Mohammad February 1, 2010 at 1:47 PM
Hlaing Htaik Htar February 24, 2010 at 3:44 PM
>The only religeon that destroys the peaceful world is MUSLIMS or ISLUMS whatever they calles their selves..
>Christian God, Hindu God, Buddha and all other Gods do not give order to kill people and destroy other religeons.
>Nowadays , who is creating problems , destroy the world's beauty,
> Yes they are,Allah and his associates.
kyiheine June 7, 2010 at 7:39 AM
ဟားးးးးး လိုပဲရီချင်တယ် ခွေးသားဝက်မြေးတွေ photo shop တက်တိုင်း ပြင်နေတယ် ။မင်းလုပ်တက်သလောက် ကလေးတောင်လုပ်လိုရတယ် မင်း အမေတောင် ငါနဲ့ အတူ အိပ်တဲ့ ပုံတောင်လုပ်လိုရတယ် မယုံရင် မင်း အမေပုံပေးလိုက်နော် ငါနဲ့ မတန်ပါဘူး မင်းတို က ခွေးမျိုးဆို တော့ ခွေးနဲ့ ချတဲ့ ပုံ လုပ်ပေးမယ် ရိုင်းသွားရင် sorry ပဲ
gwado January 26, 2013 at 6:08 AM
ဒီကောင်တွေစဉ်းစား တတ်တဲ့ ဦးနှောက် မရှိကြဘူး။ ကလေးတွေ လိုပဲ သင်ပေးသမျှ လက်ခံကြတယ်။ သနားစရာ မူဆလင်များ။
cho tun February 5, 2013 at 7:34 PM
ဘာသာတခုကို ချေချေမြစ်မြစ် နားမလည်ဘဲ မရေးသင့်ပါဘူး သယ်ချင်းတို့
ကိုယ့်ကံကို ကိုယ်သာပြုလုပ်သာပါ ဘယ်သူတစ်ယောက်ကမှ ဖန်ဆင်းသာမဟုတ်ပါဘူး ထမင်းစားရင် ထမင်းဝင်မယ် မစင်စားရင် မစင်ဝင်မယ် သဲစားရင် သဲပဲဝင်မှာပေါ့ လူဆိုသာ egg နှင့် spem ပေါင်းလို့
i.hope.tree April 7, 2013 at 7:02 AM
i.hope.tree April 7, 2013 at 7:06 AM
ခွေးသားဝက်မြေးကြွက်ယောက်ဖ မဟုတ်ရင်မနာနဲ့ ခွေးသား....
thar aung October 7, 2013 at 4:21 AM
လောကကြီးကိုမင်းတို့သိသလောက်နဲ့ထင်ရာပြောမယ်ဆိုရင် မကြာခင်ကမ္ဘာကြီးမှာတတိယ လေသေနပ်စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ကုန်လိမ်မယ် လောကကိုအရောင်မဆိုးကြပါနဲ့ကွာ လူတိုင်းသေရင်မြေကြီးထဲအရင်ရောက်မှာ ဘာသာတိုင်းကသန့်ရှင်းပါတယ် မင်းတိုစိတ်ကမသန့်တာ ဘာသာတိုင်းကလိမ္မာဖို့ဆုံးမထားပေမဲ့ မင်းတို့ကမိုက်ရိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ သူတပါးနစ်နာစေမဲ့commentမရေးကြဖို့ ဦးလေးမင်းပထွေးအနေနဲ့ဆုံးမတာလေးတွေကိုအ၀ီစိရောက်တဲ့အချိန်ကြမှနောင်တမရစေလိုသောစေတနာနဲ့ မင်းအမေဟိုဟာထောက်နေလို့သာအမုန်းခံ ပြောနေရတာပါ ဒူးမနာသားလေးတို့ရေ